फेरि बसे डा.केसी अनशनमा,मिचिएको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने माग!ठिक गरेकी बेठिक ? « गोर्खाली खबर डटकम
फेरि बसे डा.केसी अनशनमा,मिचिएको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने माग!ठिक गरेकी बेठिक ?
काठमाडौं -: संसारभर महामारीका रूपमा फैलिइरहेकाे कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणवाट जाेगिन भन्दै सरकारले देशभर लकडाउन गरेकाे छ । एकठाउँवाट अर्काे ठाउँमा जान नपाउने सरकारकै निर्देशन भएका बेला चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै धेरै पटक अनशननै बसेका डा. गोविन्द केसीले फेरि दार्चुलामा अनसन सुरु गरेका छन् ।
﻿ अनौठो पत्याउनै नसकिने काम गर्दा गर्दै समातिन् यी महिला : थाहा पाउँदा सबै चकित